काठमाडौं – एसियामा नेपाल प्रहरी तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले बताएका छन् ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा गैरआवासीय नेपालीले राखेको अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले नेपाल प्रहरी एसियामा तेस्रो रहेको बताए ।
‘नेपाल प्रहरी अहिले एसियामा तेस्रो स्थानमा छ । नेपालमा कसैलाई पनि सुरक्षा छैन भन्ने समस्या छैन । नेपाल प्रहरी शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि, कानून पालना गर्ने हिसाबले पनि र जनताको प्रहरीप्रति बढेको अपेक्षाको हिसाबले पनि अग्रपंक्तिमा छ,’ उनले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुुसन्धानमा नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा कम ०.०१ प्रतिशत मात्रै भ्रष्टाचार रहेको देखाएको उनले बताए । ‘हिजोका दिनमा नेपाली प्रहरीप्रति रहेको गुनासोको प्रहरीले सम्बोधन गर्दै गइराखेको छ । प्रहरीले दिने सेवा र जनताले लिने सेवाको बीचमा कति ग्याप छ ? त्यो ग्यापलाई कसरी घटाउने ? ग्याप किन भयो ? जनताको अपेक्षा के हो ? प्रहरीले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? प्रहरीको व्यावसायिकता चुकेको छ कि ? चरित्रमा चुकेका छौं कि ? यी सबै कुरामा अनुसन्धान गरिएको छ,’ डीआइजी पोखरेलले कार्यक्रममा भने ।
नेपाली जुन देशमा बसेपनि नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ उन्नति र प्रगति गर्दा खुशी तुल्याउने डीआईजी पोखलले बताए । ‘नेपाल भूमिमा उन्नति र प्रगति गर्नु नै नेपालीहरूको लागि गौरव र खुशीको कुरा हुन्छ । तपाईंहरू विदेशमा बसेर पनि नेपालको विकासको लागि कति चिन्तित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म १ महिना अमेरिकामा रहँदा अनुभव गरेको कुरा हो,’ डीआईजी पोखरेलले भने ।
नेपाल विकासतर्फ लम्किरहेको बेलामा विदेशमा रहेका नेपालीको पनि भूमिका हुने भएकाले नेपालले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानलाई सफल पार्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । ‘विदेशमा रहँदा सामान्य कर तिर्न मानसिकरुपमा तयार हुने अथवा कमाएको केही प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा तयार हुने तर नेपालमा सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि नतिर्दा अझ आफू शक्तिशाली देखिन्छु भन्ने मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्छ,’ पोखरेलले गुनासो गर्दै भने, ‘मुलुक बनाउनको लागि विश्वभरका नेपाली एक भएको अवस्था छैन । मुलुक बन्नुपर्छ भन्ने सबैमा छ तर एकसाथ कसैले भनेको देखिएको छैन ।’
डीआईजी पोखरेल नेपाल प्रहरीको तर्फबाट तालिमका लागि अमेरिका गएका थिए ।